DOWNLOAD Eurocopter EC 120B Colibri FS2004
Helikoptera tsotra ho an'ny FS2004 ity. Ampidiro ny rafitra Carmin sy radio manontolo. Hita miaraka amin'ny loko roa mety tsara. Tena tsara ny feo.
Ny Eurocopter EC120 Colibri dia maotera tokana fahazavana angidimby nitranga ny Eurocopter amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny China National Aero-Teknolojia Import & Export Corporation, Harbin Aircraft Manufacturing Corporation sy ST mpahay siansa, ary nivory tany amin'ny atrikasa ny Eurocopter in Marignane. Natao mba hitondra ny mpanamory sy mpandeha efatra, ary manana Hainy ny mampifanaraka ny filàn'ny ny mpanjifa, na mpividy na sampan-draharaha tsy miankina, na miaramila.
15798 3.96 (23)
Nosoratan'i Laurent Hadorn, Christian Spaltenstein, Franz Haider
12807 4.00 (11)
19494 2.82 (11)
Nosoratan'i Antti Pankkone, Alan Devins, Keith Devins, Niki Jellinek, George Arana, Fabien VENRIES
ICARO BK117 Farany Edition Package FS2004
12278 4.20 (5)
12158 3.67 (9)
Nosoratan'i Laurent Corriea
7794 2.60 (5)
Nosoratan'i FSpainter / Florian LAROYE
30241 4.48 (31)
Nosoratan'i Laurent Hadorn, Franz Haider, Denis Allavena, Chris Spaltenstein
6472 4.13 (8)
13517 4.00 (26)
Nosoratan'i I-FOX Franco
11763 4.00 (6)
Nosoratan'i Paint de Ronald van Doorn, sary avy amin'i Michael W. Ro
10672 3.64 (14)
Nosoratan'i Tamas Nemeth, Peter Nemeth, Adriano Martoni